Microsoft yakaburitsa C ++ standard raibhurari kodhi iri muVisual Studio | Linux Vakapindwa muropa
Pamusangano weCppCon 2019 yanga ichipembererwa mazuva ano, vaburitsi veMicrosoft vakatora mukana uyu kuita chiziviso chekuvhurwa kwekodhi pakuitwa kwayo kubva kuC ++ Standard Library (inozivikanwawo se STL), inova chikamu cheiyo MSVC Toolkit uye iyo Visual Studio yekuvandudza nharaunda.
Raibhurari inoshandisa kugona kunotsanangurwa mune yazvino C ++ 14 uye C ++ 17 zviyero, uye inogadziriswazve munzira yekutsigira ramangwana C ++ 20 standard, zvichitevera shanduko mune yazvino inoshanda dhizaini.
Maererano ne izvo zvikonzero nei vanhu veMicrosoft vafunga kuita danho iri, muchirevo ivo vanotsanangura:
Pane zvikonzero zvinoverengeka nei tichiita izvi, chimwe chazvo ndechekushanda pane STL paGitHub, izvi zvinobvumidza vatengi vedu kuteedzera kuvandudza kwedu sezvazvinoitika, kuyedza shanduko dzazvino uye kutibatsira kuvandudza zvikumbiro zvedu zvekudhirowa nekuzviongorora.
Sezvo C ++ standardization ichimhanyisa, uye makuru maficha akavhoterwa gore rega rega, isu tinofunga zvichange zvakakosha kutambira zvakakosha zvinhu seyakavhurwa sosi yemipiro. (Semuenzaniso, iyo C ++ 20 fomati uye yekuverenga nguva maraibhurari ndivo vanogona kukwikwidza.) Isu tinodawo kupa rubatsiro kudzoka kunharaunda yeC ++ nekuita kuitiswa kwedu kwepamoyo mabasa. (Semuenzaniso, charconv kubva kuC ++ 17)
Nayo Vanhu veMicrosoft vanozivisa kuti vanoronga kuenderera nekuvandudza raibhurari iyi seyakavhurwa chirongwa iyo iri kuvandudzwa paGitHub iyo ichagamuchira zvikumbiro zvekudhonza kubva kune vanogadzira vekunze vane zvigadziriso uye kuitwa kwezvinhu zvitsva (kutora chikamu mukuvandudza, chibvumirano cheCLA chinodikanwa kuendesa kodzero dzevaridzi kukodhi yakachinjiswa).
Zvinoonekwa kuti kuendesa budiriro kubva ku STL kuenda kuGitHub kunobatsira vatengi veMicrosoft ku track budiriro yekufambira mberi, kuyedza neshanduko dzichangoburwa, uye batsira kuongorora zvinouya zvikumbiro zvezvinhu zvitsva.
Vhura kodhi zvakare bvumira nharaunda kushandisa zvakagadzirirwa-zvakaitwa mikana yemitemo mitsva mune mamwe mapurojekiti.
Nezve rezinesi rekodhi reibhurari ino, Inokurudzirwa seyakavhurika pasi peiyo Apache 2.0 rezinesi kunze kwemafaira ebhinari anogadzirisa dambudziko rekusanganisira maraibhurari enguva yekumhanya mukuumbwa kwemafaira anogoneswa anogadzirwa.
Kujekesa, MSVC STL haisi kusangana ne libc ++ sezvo iwo achiri marara kuraibhurari.
Microsoft inotsanangura kuti nei rezenisi rekodhi inosarudzwa nenzira yekubvumidza kodhi kuchinjisa neLLVM projekti ye libc ++ raibhurari. STL uye libc ++ zvinopesana mukumiririrwa kwemukati kwezvivakwa zvemadhata, asi kana vachida, vagadziri ve libc ++ vanogona kutakura zvinonakidza zveStl mashandiro (semuenzaniso charconv) kana mapurojekiti ese ari maviri anogona kubatana kugadzira zvimwe zvigadzirwa.
MSVC STL inogoverwa pasi peiyo Apache v2.0 rezinesi pamwe neLLVM kunze, iyo ichangobva kugadzirwa neiyo Clang / LLVM / libc ++ chirongwa.
Iwo akasarudzika akawedzerwa kune rezinesi reApache anodzima chinodikanwa chekutaura kushandiswa kwechigadzirwa sosi paunounza STL-yakanyorwa mabinaries ekugumisa vashandisi.
Iri rezinesi rakavhurika sosi rezinesi rakasarudzwa nekuti kuve nerezinesi rakafanana ne libc ++ izvo zvinoita kuti zvive nyore kugovana kodhi pakati pemaraibhurari. Kujekesa, iyo MSVC STL haisi kubatanidzwa ne libc ++; iwo achiri maraibhurari akasarudzika anotsigira mapuratifomu akasiyana ane akasiyana mameseji edata.
Kune rimwe divi, chimwe chezvinangwa zvakakosha zveiyo chirongwa chinonzi kutevedzera zvizere nezvinodiwa maratidziro, kuverengera kuita kwakanyanya, kurerukirwa kwekushandisa (kugadzirisa dambudziko, kuongororwa, zvishandiso zvekukanganisa), uye sosi uye ABI nhanho inoenderana neshanduro dzekare dzeVisual Studio 2015/2017.
Pakati penzvimbo izvo Microsoft haifarire mukukudziridza ndeyekutakurika kune mamwe mapuratifomu uye kuwedzera tsika dzekuwedzera.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve chirevo chakaitwa neMicrosoft unogona kuzvibvunza Mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Microsoft yakaburitsa yakajairwa C ++ raibhurari kodhi iri muVisual Studio